Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » UngaHamba njani nge-Omicron entsha ye-COVID?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Eli cebiso liza kwiintsuku ezimbini emva kokuba ihlabathi livuswe lolunye uhlobo lweCoronavirus, eyaziwa ngokuba yi-Omicron, okanye ngokobuchwephesha ukwahluka kwe-B.1.1.529.
The World Health Organization Ucenge iinkokeli zehlabathi ukuba zingabandakanyeki kwiimpendulo zamadolo kwaye uye walumkisa ngokunyanzeliswa kwezithintelo zokuhamba xa kuvela iindaba malunga ne-Omicron.
Oku kuyonakalisa ngokukodwa iShishini leHlabathi lezoKhenketho ngelo xesha ukukhanya okuqaqambileyo kokuchacha kwakuqaqamba. I-World Travel Market eLondon okanye i-IMEX eLas Vegas igqitywe ngempumelelo. Imvakalelo yokuba nethemba yabangela iinqwelomoya ezintsha zamazwe ngamazwe, ukuvulwa kweehotele, kunye nokukhuthazwa kokhenketho kwihlabathi.
Eli themba latshatyalaliswa kwiiyure nje ezimbini ezidlulileyo xa amazwe aseYurophu aqalisa ngoko nangoko ukuvala uhambo lokuya kuMazantsi e-Afrika. Oku kwalandelwa sisithintelo sokuhamba sase-US esiyalelwa nguMongameli uBiden.
Ngokwengxelo yeendaba ekhutshwe yi UBuphathiswa boBudlelwane baMazwe ngaMazwe neNtsebenziswano boMzantsi Afrika, uhlobo olutsha lwabhaqwa okokuqala eBotswana, okwesibini eMzantsi Afrika.
Yahamba sele isiya eJamani, eNetherlands, eHong Kong, iziswe ngabakhweli kwinqwelomoya zamazwe ngamazwe. Le ntsholongwane kwisithuba sosuku ayisengomba wedwa eMzantsi Afrika.
Nangona amazwe aquka i-United Kingdom aphendule kwiiyure nje ezimbalwa kwimida yokuvala, ukurhoxisa iinqwelomoya phakathi kwe-UK noMzantsi Afrika, ayikwazanga ukunqanda le ntsholongwane ukuba iwele kumazwe angaphandle. Yayisele iseYurophu naseHong Kong ngaphambi kokuba ihlabathi lonke lingazi nto ngayo.
Ilizwe laseNew York, ilizwe laseMzantsi Melika laseColombia libhengeze imeko kaxakeka yezempilo ngokusekwe kolu hlobo lutsha lwentsholongwane, nangona basenazo iimeko zero.
Lo mkhwa wokunqanda iinqwelomoya eziya eMazantsi e-Afrika ngoku ubeka yedwa uMzantsi Afrika, uvala ishishini lokhenketho kunye nokhenketho. Namhlanje nje iQatar kunye neSeychelles ibhengeze ukuvalwa kwemida kunye namakhonkco omoya.
ISaudi Arabia, nangona kunjalo, isandula ukubhengeza ukuba iya kuvumela ukungena kubahambi abavela kuwo onke amazwe, ukuba nje befumene idosi enye yesitofu sokugonya se-COVID-19. Noko ke, uBukumkani bazinqumamisa iinqwelo-moya eziya eMzantsi Afrika, eNamibia, eBotswana, eZimbabwe, eMozambique, eLesotho nase-Eswatini.
Inetherlands kunye nenani lamanye amazwe avaleleke phantsi.
… kodwa kanjani?
U-Anita Mendiratta, umcebisi kuNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili izolo ubhale le tweet kumphathi wakhe, awayipapashayo kwi-Twitter yakhe esithi:
Amava abonise ukuba usekwe kwingozi, indlela yezenzululwazi yindlela yokuhamba: Ukugcina abantu bekhuselekile ngaphandle kokusika indlela yokuphila yokhenketho.
Izithintelo zokuhamba zibeka amabala amazwe kunye nemimandla, zibeka engozini imisebenzi, kwaye zenzakalise ukuzithemba. Ziyindlela yokugqibela, hayi impendulo yokuqala.
Ngokucacileyo, nabani na othanda ukuhamba, okanye obonelela ngeenkonzo zokuhamba kufuneka avumelane nengxelo kaZurab eyenziwe kwiintsuku nje ngaphambi kokuba i-UNWTO General Assembly engekarhoxiswa eMadrid, kodwa amagama anjalo akanazo izisombululo.
I-World Tourism Network ifuna ukubonelela ngendlela entsha, esekelwe kwi-scientific scientific, kunye nenjongo yokugcina ukuhamba kunye nokhenketho lusebenza.
Esi sindululo se-WTN songeza kutyhalo lombutho lokulingana ekufikeleleni kwisitofu sokugonya ngawo onke amazwe kunye nokufuna ugonyo ukuhamba.
Akunakwenzeka ukuba kukho isitofu esaneleyo eUnited States naseYurophu, kunye nomlinganiselo wokwala wama-30 okanye ngaphezulu, ngelixa kukho umyinge we-7% kuphela yokugonywa kwiindawo ezininzi zaseAfrika, kwaye abantu banqwenela ukufikelela kobu bomi. -isitofu sokugonya.
Izinga lokugonya elisezantsi ngenxa yokufumaneka kwesitofu sokugonya likwayinyani kumazwe akude ngeemayile ezimbalwa ukusuka kwimida yase-US, kubandakanywa amazwe amaninzi eCaribbean.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ibongoza i-UNWTO, i-WHO, i-WTTC, i-IATA, oorhulumente, kunye neshishini lezohambo ukuba lityhale indlela eyahlukileyo kancinane yokufika phezu kwengxaki. I-WTN ivakalelwa kukuba le ndlela ayinakutshabalalisa uhambo olubalulekileyo kunye neshishini lokhenketho, kwaye ivumele indlela enethemba lokuba eli shishini lisebenze kwaye liphumelele nge-COVID-19.
Indlela enjalo ibisebenza kumazwe athile, kuquka noSirayeli.
Ngaphambi kokuba inqwelomoya nganye yaMazwe ngaMazwe ifune uvavanyo lwe-PCR olukhawulezayo kwisikhululo seenqwelomoya okanye kwiiyure ezingama-24 phambi kokuba ihambe, nakwabo bagonywe ngokupheleleyo.
Qinisekisa ukuba wonke umntu okhwele inqwelo moya yamazwe ngamazwe ugonywe ngokupheleleyo.
I-Influenca luhlobo lweCoronavirus kwaye ihlala ingenakuhlukaniswa ne-COVID-19, yenze ukuba kunyanzeleke ukuba abakhweli bafumane ugonyo lomkhuhlane, ngakumbi ngexesha lomkhuhlane.
Uvavanyo olukhawulezayo lwe-PCR yindlela entsha yovavanyo lwe-Covid-19 esandula kuvunywa yi-FDA. Uvavanyo lwe-PCR olukhawulezayo luhlobo olutsha olunomdla lovavanyo lwe-Covid kuba ludibanisa ukuchaneka kovavanyo lwe-PCR kunye nexesha elikhawulezayo lokuguqula uvavanyo olukhawulezayo. Olu mvavanyo lwe-Covid ludla ngokuthatha malunga nemizuzu eli-15 ukunika iziphumo.
Uvavanyo lwe-PCR olukhawulezileyo lukhetho olufanelekileyo kuye nabani na ofuna iziphumo ezichanekileyo ngokukhawuleza, njengomntu ofuna iziphumo zokuhamba kwimizuzu eli-15 ukusuka kude, okanye xa efumana iimpawu ze-Covid-19.
Uvavanyo lwe-PCR olukhawulezayo luxilongo lwe-nasal swab. Basebenza ngokuchonga imathiriyeli yemfuzo ethile yentsholongwane. Uvavanyo lwe-PCR lujonga izinto ezifumaneka ngaphakathi kwintsholongwane kwinqanaba lemolekyuli, kunokukhangela iiprotheyini ezifumaneka kumphezulu wentsholongwane, njengoko zisenza uvavanyo lwe-antigen.
Uvavanyo lwe-PCR oluKhawulezayo kufuneka lube luqhelekileyo kwiiyure ezingama-24 zohambo lwamazwe ngamazwe, kwaye lufumaneke kwizikhululo zeenqwelomoya xa ujonga inqwelomoya yamazwe ngamazwe, ngokutshoyi-World Tourism Network entsha ingcebiso.
Ngendlela enjalo amazwi kaNobhala-Jikelele we-UNWTO ukusebenzisa uthintelo lokuhamba njengento yokugqibela iba yinyani.
Ngaphandle kwayo, ilizwe ngalinye liya kutsala ibhuleki likaxakeka ukukhusela abemi balo. Kwiimeko ezininzi, oku kusemva kwexesha, nokuba kwenziwa phakathi kosuku okanye ezimbini, okanye xa ulindele ukuqonda uhlobo olutsha.
UMongameli we-WTN uGqirha Peter Tarlow uthi:
“Kufuneka sifunde kule meko. Akukho xesha lokoyika, kufuneka sisebenzise iingqondo zethu, kwaye sizise eli shishini, impilo kunye noorhulumente kwiphepha elinye. ”
Le ndlela ithatha inzame enkulu kuzo zonke iindawo. Amazwe, kuquka neSaudi Arabia, ebekhokele kuKhenketho lweLizwi kwaye abeka imali emva kweengcinga ezilungileyo.
Ngoku lixesha lokutyala imali ekuphumezeni inkqubo, ukuyenza ifumaneke naphi na ehlabathini.
Oku kuyimfuneko, ke ngoko sonke sikhuselekile, kwaye nokuqinisekisa ukuba uhambo kunye nokhenketho lunokuphumelela naxa kuvela izisongelo ezitsha zempilo ezinxulumene ne-COVID.